Top 5 Adeegyada Music Streaming iyo muuqaalada
Waxaa jira tobanaan kun oo adeegyada oo loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa dadka isticmaala ee adduunka oo dhan iyo waxa kale oo ka mid ah kooxda ka mid ah warshadaha sida Google, Apple iyo xitaa YouTube haddii aan sameeyo aqoonsiga laba kuwan oo kala duwan. Tutorial ah in la soo halkan ku qoran hubiyo in dadka isticmaala ay hesho aqoon qoto dheer oo ku saabsan adeegyada geeyo ee la bixiyo by shirkadaha adduunka oo dhan ka dhigi doonaa. Adeegyada soo socda la hadli doonaa si faahfaahsan weyn:
Adeeg geeyo 1. YouTube Music
2. Google Music adeeg geeyo
3. adeeg geeyo music Lugood
4. Adeeg geeyo Spotify
5. Adeeg geeyo Soundcloud
Download / Record music free la TunesGo
Waa in la ogaadaa in adeegga geeyo music YouTube sidoo kale loo yaqaan key music waa mid ka mid ah adeegyada ugu fiican oo lagu qiimeeyo sare by users iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in adeegga ayaa ganaax sida horumarinta waxaa ka shaqeeya beta version. Habkan soo socda si kastaba ha ahaatee waa in la adeegsadaa si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah in arrintan la xiriira:
a. URL ayaa https://www.youtube.com/musickey waa in laga heli si aad u hesho bogga ugu weyn ee Music Key Beta ah:
b. User wuxuu u baahan yahay in la buuxiyo cinwaan email iyo dalka waayo, haatan si loo hubiyo in sida ugu dhakhsaha badan hagaajinta la dhameeyo heegan ah ayaa la helay:
c. User ayaa si kastaba ha ahaatee ku raaxaysan karaan kale adeegyada geeyo YouTube sidoo kaas oo ka mid ah heesaha ugu sareysa qiimeeyo, playlists sare, music sare iyo videos music caan ah iyo sida Banaanbaxa user ay u baahan tahay in ay soo booqdaan https://www.youtube.com/playlist?list=PLFgquLnL59alCl_2TQvOiD5Vgm1hCaGSI si bogga soo socda soo booda,
d. Mid kasta oo ka song in lagu Xusi on page waa la riixi kartaa si aad u bilowdo geeyo iyo waxa ay sidoo kale hubineysaa in isticmaalka internetka kale ee isku xirta song ayaa sidoo kale waxaa si fudud u soo bixi karaa.
Adeeg geeyo 2. Google Music
Sidoo kale waa mid ka mid ah adeegyada ugu fiican si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyey user ee ugu fudud in aad hesho natiijada ugu wanaagsan iyo waliba. Dadka isticmaala ayaa ka weyn tahay 22 milyan oo tirada guud oo uu muujinayaa caan iyo dadka isticmaala ay sidoo kale qaban dib u eegista aadka u wanaagsan oo ku saabsan adeegga ay taageerayaan ciidammada xoogga Google adeega weli u baahan yahay interface tiirsan cabsi badan iyo is taas oo macnaheedu yahay isbedel:
a. User waxay u baahan tahay inay la soo wareegto ilaa iyo inay ka adeegaan at www.googlemusic.com e
b. Habka ugu habboon markaas waa in la soo xulay:
c. Xisaabta caadiga ah waxaa markaas lagu dhejiyo by siiyo macluumaadka loo baahan yahay oo dhan:
d. Tababaraha music waxaa markaas in la soo bixi:
e. Diiwaangelinta waxaa markaas loo baahan yahay:
f. Tababaraha music waxaa markaas in la synced la Lugood ah:
g. Marka heesaha oo lagu markaas uploaded bogga ugu weyn ee tababare music furi doonaa:
h. User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in song la riixi inuu u ciyaaro:
Sidoo kale loo yaqaan radio Lugood waa mid ka mid ah adeegyada ay arkaa in ay yihiin kuwa ugu fiican sida ay hubineysaa in gabayadii ugu dambeeyey yihiin had iyo jeer waxaa si aad u hesho dadka isticmaala ku marti qaaday. Waxa uu helay dib u eegista aadka u wanaagsan ka isticmaala iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in faa'iidada ugu weyn ee isticmaalaya adeega waa in ay ka dhigaysa user dareemaan xaqiiqada dhabta ah ee ka qulqulaya, fursadaha si kastaba ha ahaatee waa mid aad u adag. Geedi socodka la xiriira waa sida soo socota:
a. Lugood waa in la furay:
b. Ugu geeska hoose ee bidixda icon radio waa in la daah furo:
c. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in saldhigyada ciyaaray yihiin browsed iyo waxa la qaban karaa by kabacdi ka bidix illaa midig:
d. Calaamadda + sidoo kale la riixi karo si loo hubiyo in saldhig cusub radio loo abuuray:
e. User ayaa sidoo kale isticmaali kartaa noocyo xarun cusub:
f. Magaca artist iyo heesaha oo sidoo kale lama soo baadhi karo,
g. User ayaa sidoo kale isticmaali kartaa fursadaha halka kuwo liita ee la qabtay:
4. adeeg geeyo music Spotify
Adeeg geeyo Tani waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in aysan kaliya waxay bixisaa adeegyada ugu fiican ee arrintan la xiriira, laakiin sidoo kale u ogolaataa dadka isticmaala si aad u hesho adeegyada waa gobol ka mid ah tahay. Guud ahaan interface xiddig faa'iido ugu wanaagsan ee isticmaalka adeeggan iyo marka ay timaado Diiwaanka heesaha ka dibna waa in la ogaadaa in kuwaasi waa warbixin joogta ah. Waa in la ogaadaa in ka dib waa habka ay tahay in lagu sameeyo arrintan la xiriira:
b. Shuruudaha iyo xaaladaha waa in la aqbalaa oo akhri haddii user ayaa time:
c. Xisaabta ayaa waxaa ka dibna dib loo eego:
d. Codsiga desktop waxaa markaas waa in la soo bixi:
e. The button aad u bilowdo ay tahay in la sii adkeeyey si aad u hubiso in songs Spotify iyo channels yihiin riyaaqay iyo music la huleeshay:
f. Tab raadinta waxaa loo isticmaali karaa si ay caleenta ka fanaaniinta iyo heeso:
g. The playlist cusub ayaa sidoo kale la abuuri karo:
h. Doorasho Radio ayaa sidoo kale lagu riixi kartaa si aad u hubiso in geeyo waxay ka bilaabantaa,
i. User ayaa sidoo kale ka dhigi kartaa hubiyo in kuwa kale la raacay iyo music waxaa si fudud la wadaago,
5. adeeg geeyo music Soundcloud
Soundcloud ayaa hubaal ah uma baahna barasho. Faa'iidada ugu weyn ee in la hubiyo in Soundcloud la isticmaalo waa in ay jiraan tiro dad ah oo aan la tirin karin heesaha waxaa iyo marka ay timaado interface ma aha in jiidasho leh. Habkan soo socda waa in la raaco:
a. Habka calaamad kor waa in la buuxiyaa,
b. Profile waxaa markaas lagu dhejiyo ilaa si buuxda:
c. User ayaa sidoo kale gali kartaa tareenka oo aan wax ka kaaftoomi iyo dhibaato,
d. Qaadashada playlist ayaa sidoo kale waa mid aad u fudud:
e. Playlist ayaa sidoo kale la saxar kartaa:
f. Gabayada ee bogga ugu weyn ee ay tahay in la sahmin iyo sidoo guji si aad u bilowdo hoorto:
g. Heesahaas ayaa si gaar ah waxaa sidoo kale lagu huleeshay kartaa:
h. Kooxaha gudahood user ayaa sidoo kale khadka kartaa heeso si ay u ciyaaro si fudud:
> Resource > YouTube > Top 5 Streaming Services Music iyo Features